Ugu yaraan 15 askari oo Kenyan ah ayaa lagu dilay Lamu | KEYDMEDIA ONLINE
LAMU, Kenya - Ugu yaraan 15 askari oo ka tirsan milateriga Kenya ayaa lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay qarax ka dhacay gobolka Lamu oo u dhow soohdinta Soomaaliya maanta oo isniin ah, sida ay sheegatay Kooxda Al-Shabaab.
Qaraxa oo nuuciisu ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa haleelay kolonyo milateri ah oo ka tirsan, ciidamada difaaca Kenya [KDF] inta u dhaxeysa Kayunga iyo Sankura xilli ay ku sii jeedeen xudduudka.
Dadka degaanka ayaa sheegay in ciidanka KDF ay dhinac walba u rideen rasaas kadib weerarka miinada ee lala beegsaday, oo noqonaya kii labaad oo noociisa ah tan iyo shalay kaas oo ka dhaca Lamu, oo ah gobol xeebeed xuduudka dhaca.
Ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-shabaab ee ah inay 15 askari ku dishay weerarka, sidoo kale milateriga Kenya wax war ah kama soo saarin dhacdadaas.
Dalka Kenya ayaa ah waddanka ugu badan ee wajaha weerarada Al-Shabaab, marka laga yimaado Soomaaliya, waxaana dhacdooyinka la xusi karo ka mid ah weerarkii lagu qaaday Westgate Mall sanadkii 2013 kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 60 qof iyo xasuuqii Jaamacadda Garissa oo ay ku dhinteen 148 arday.
Sidoo kale, Soohdinta baaxadda leh ee u dhexaysa Soomaaliya iyo gobollada Waqooyi ee Kenya, ayaa degmooyinka Wajeer, Mandheera iyo Gaarisa ka dhigtay bartilmaameedyo u nugul weerarrada Al-Shabaab, halkaas oo bishii Nofembar 2014 ay ku xasuuqeen 28 qof oo aan Soomaali ku jirin.
Kenya waxay Soomaaliya la wadaagtaa xudduud lagu qiyaasay 681 kiiloomitir (423 mayl) laga soo bilaabo xudduudka Itoobiya ilaa Badweynta Hindiya.
Kooxda Al-Shabaab ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonaan weerarrada ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ee Kenya, ilaa Xukuumadda Nairobi ay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya.